Shamwari, shamwari dzinodiwa, mune iyi hurukuro inonzi Art German artikeller anlatım, kunyanya avo vari kutanga kutanga kudzidza German vanoziva, dzimwe nguva vane dambudziko uye vanhu vazhinji vanotambudzika kunzwisisa. German Articles will.
Muzvidzidzo zvedu zvekutanga, takataura kuti mavambo emazita echiGerman anofanirwa kunyorwa nemavara makuru uye kuti zita rega rega rine chinyorwa.
Muchidzidzo chedu chinyorwa chakanzi chiGerman, isu tichatanga kubata kuti chii chinyorwa, mangani marudzi ezvinyorwa zviri muchiGerman uye mazwi api ari pamberi pezvinyorwa izvi. Chekupedzisira, isu tichasimbisa zvatakatsanangura nemienzaniso uye tichapedzisa nemubvunzo wenyaya yezvinyorwa zveGerman.
Musoro wezvinyorwa zveGerman inyaya yakakosha kwazvo. Inofanira kudzidzwa chaizvo. Zvinyorwa zveGerman Izvo hazvigoneke kuti iwe utaure uye unyore chiGerman nenzira kwayo usingazive kuti mangani marudzi ezvinyorwa ari. Kunyanya muzvidzidzo zvakaita semazita uye zvipikisheni zvirevo nyaya iri Kuva neruzivo rwakanaka pamusoro pazvo kuchaita kuti basa rako rive nyore.
Mushure mekuverenga iyo yeGerman zvinyorwa zvinyorwa, tinokurudzira kuti iwe utore iyo yeGerman zvinyorwa zvinyorwa bvunzo nemibvunzo mishoma panoperera chidzidzo. Iye zvino ngatipei misoro yedu yemusoro wenyaya uye titange chidzidzo chedu.
YAKADZIDZWA MUGERMAN NYAYA
Nyaya yekukurukurirana inowanzotaurwa semumwe wezvinetso zvakaoma kuvadzidzi veGermany.
Muchikamu chino tichakurukura nyaya iyi netariro kuti uchaona kuti iyi haisi nyaya yakaoma zvikuru.
Ngatitarisei kuti kana ukaisa mumusoro mazwi pamwe nezvinyorwa zvavo, hauzove nedambudziko rakakura neizvi. Asi zvakadaro, tichaita mapoka akakura pamusoro penyaya iyi uye toongorora kuti ndedzipi mhando dzemazwi dzinoshandiswa nechinyorwa ichocho.
MuchiGermany, mazita evanhukadzi anokwidza, uye kune marudzi matatu.
MuGerman, mazita ari echirume, echikadzi kana asina kwazvakarerekera. Naizvozvo, chinyorwa pamberi pezita chinoshanduka zvichienderana nehunhu hwezita.
Kune maviri marudzi ezvinyorwa muchiGerman, yekutanga iyo iri yakatarwa zvinyorwa uye yechipiri ndeyezvisingagumi zvinyorwa.
MuGerman, zvimwe zvinyorwa zvinodaidzwa, das uye kufa zvinyorwa.
Indefinite zvinyorwa muchiGerman ein uye eine zvinyorwa.
Iko zvakare kune imwe chinyorwa uye isingazivikanwe yechinyorwa pfungwa muChirungu. Shamwari dzinotora zvidzidzo zveChirungu dzinogona kunzwisisa nyaya yacho zvirinani. MuchiRungu, chinyorwa chacho chine chirevo, uye pane zvikamu zviviri zvisina kujeka, a uye an. Iko kushandiswa kwezvimwe zvinyorwa uye zvisingazivikanwe zvinyorwa muChirungu zvakafanana neizvo muchiGerman.
Zvimwe zvinyorwa uye zvisingazivikanwe zvinyorwa muchiGerman Takataura kuti kune mhando mbiri dzezvinyorwa, zvinoti.
Saka ikozvino anoti, anozivikanwa semad uye kufa zvinyorwa Zvinyorwa zveGerman zvakasarudzika Ngatipe ruzivo nezve:
MuGerman der das die Rimwe remazwi rinowanikwa. Aya mazwi haana zvakafanana neTurkey uye haakwanise kududzirwa zvizere mumutauro wedu. Aya mazwi akafanana nechikamu chezita ravari. Paunenge uchidzidza zita, zvinonyanya kukosha kuti udzidze chinyorwa charo pamwechete sekunge riri izwi rimwe chete rine zita. It der das die mazwi akarongedzwa sezvimwe zvinyorwa.
Kana iwe uchingoyeuchidza iro izwi usina kudzidza chinyorwa, iro izwi rawakadzidza haringaite zvakanyanya. Nouns muchiGerman, zvakasarudzika uye muzvizhinji, zvipikisheni mitsara zvichingodaro Kukosha kwezvinyorwa kunozonzwisiswa zvirinani. chinyorwa mune dzimwe nzvimbo imesdefinely"Vamwe vavo"prepositionRinopfuura richiti ”. Pamusoro pezvo, zvinyorwa zvakapfupikiswa sezvakaratidzwa pasi apa mumaduramazwi akawanda nezviwanikwa. Ndokumbirawo urambe uchifunga mundangariro mabhii ekudimbudzira anoratidzwa.
MuGerman, chinyorwa chemazita echikadzi anechikadzi ari murume "der".
MuGerman, chinyorwa "kufa" ndicho chinyorwa chemazita echikadzi anechikadzi ari munhukadzi.
Chinyorwa chemazita echikadzi asina chechikadzi muchiGerman ndi "das".
Nekudaro, kana isu tichiti murume wechikadzi wezita, ngatiteerere kune zvinotevera: Zvakaoma kuziva hunhu hwemazita echiGerman, haugone kufanotaura hunhu hwezita kubva pane zvinoreva zita iro. Izvi zvese ndezve grammar uye neshoko dhizaini. Naizvozvo, kana uchidzidza izwi idzva, ndeupi murume kana murume weshoko uye chinyorwa Unogona kudzidza zvazviri chete kubva mumaduramazwi. Kunyangwe paine dzimwe nzira dzekufungidzira kuti murume kana murume uye chinyorwa chezwi chingave chiGerman, ichiri icho chakanyatsoita Kune duramazwi reGerman kutarisa uye kudzidza.
Mienzaniso yezvinyorwa zveGerman:
das Buch : Bhuku
kufa katze : katsi
der Baum : Muti
kufa Blume : Ruva
das Auto : Mota
Mifananidzo Mienzaniso yeGerman Artikel Usage
Mufananidzo unotevera une mazwi pamusoro pekushandiswa kwezvinyorwa muGermany.
Sezvo zvinogona kuonekwa mumufananidzo, mazita ehurume nemadzimai pamberi pemasvingo, mazita evanhukadzi pabonde pamberi pekufa kwemafa, pamberi pevasina zvematongerwo emadzimai evanhu vane zvematongerwo enyika vasati vasvika.
MuGerman, hapana hukama pakati pehutano uye zvinoreva mazwi, kureva kuti, hapana chinhu chakadai sehutano hwemashoko anokanganisa varume, sechiChirungu, kuti mazwi anotaura nezvemhando dzevarume nevakadzi ndeyevakadzi.
Icho chechikadzi chemazita echiGerman chinogona kungodzidziswa nekuyeuchidza kubva muduramazwi. Rudzi rwemazita mune mamwe mapoka akarongedzwa. Kuti udzidze zvakawanda nezvechikadzi kwemazita echiGerman ChiGerman Mazita Chidzidzo Unogona kuongorora.
Mumiriri weGerman Zvinyorwa muMaduramazwi
German articles Mumaduramazwi, sezvatakanyora pamusoro izvozvi, "der Tisch, kufa Katze" zvichingodaro. hazviitwe muchimiro. Mashoko haana kunyorwa pamwechete nezvinyorwa zvavo mumaduramazwi eGerman. Ingoisa chiratidzo chidiki padhuze neshoko uye chinyorwa zvinotsanangurwa kuti chii. Zvinyorwa zvakapfupikiswa munzvimbo zhinji seinotevera:
Kutaura kweshoko ari Mumaduramazwi eGerman, diki r tsamba yakaiswa
Kutaura kweshoko ari Mumaduramazwi eGerman, diki e tsamba yakaiswa
Kutaura kweshoko ari Mumaduramazwi eGerman, diki s tsamba yakaiswa
Tsamba idzi futir die das ndidzo tsamba dzekupedzisira dzenyaya yavo.
Kutaura kweshoko ari pedo neshoko r iyo tsamba, ari pedo neshoko e iyo tsamba, ari vimbiso s Tsamba yacho yakaiswa. Tsamba idzi futir-due-zvinoshevedzeras ndidzo tsamba dzekupedzisira dzenyaya yavo. Semuenzaniso, kana iwe ukaona tsamba r padivi pezwi kana iwe ukatarisa muduramazwi, zvinoreva kuti chinyorwa chauri kutarisa chiri mu der, nenzira imwecheteyo, kana paine e padyo neshoko, zvinoreva kuti izwi iri kufa nechinyorwa, uye kana paine s, chinyorwa chinonzi das. Mamwe maduramazwi MFN tsamba, mfn I maskulin, I Femininum, Neutrum (Nhengo dzevarume-vakadzi-vakadzi-Kusapindira kwevakadzi) ndiwo mavambo ezwi. Tsamba M, Tsamba F inopera artikelini, Tsamba N ndeyo das artikelini inomirira.
Kazhinji, zvinyorwa uye duramazwi zvinogona kushandiswa kusarudza chero chinyorwa kana "m - f - n"Kana kuti"r - s - e".
ChiGermany Zvinyorwa Zvinyorwa uye Zvikamu Zvisingagumi
Shamwari dzinodiwa, sezvatataura, tichidzidza izwi reGerman uye tichidzidza izwi idzva reGerman, isu tinofanirwa kunyatsodzidza iro izwi pamwe nechinyorwa charo.
Kudzidza izwi chii chinyorwa ichi Tinofanira kushamisika uye titarise. Isu tinofanirwa kuronga izwi rega rega kuti isu tinodzidza zvitsva maererano nechinyorwa chayo uye tinyore icho kuhuropi hwedu nenzira iyoyo.
Vadiwa shamwari, pamberi pemazwi atichashandisa mumutsara zvimwe zvinyorwa ile anozivikanwa, zvatiri kureva zvinonzwisisika, zvambotaurwa zvinhu zvinotsanangurwa. E.g, "ndakadya appleZvinonzwisisika kuti apuro rataurwa mumutsara iri raimbozivikanwa apuro. Saka "ndakadya appleNa "mutongo"ndakadya apple riyaChirevo chinopa chirevo chimwe chete. Mumutsara uyu, zvinorevei mumutsara uyu "maapuroZvinoreva kuti apuro rinozivikanwa rinonzwisiswa kuva apuro rakambotaurwa, riri pakati.
Zvimwe zvinyorwa muchiGerman der - das - kufa Isu takapa ruzivo nezve izvo zvinyorwa.
Iye zvino ngatipei rumwe ruzivo nezve izvo zvisingazivikanwe zvinyorwa muchiGerman.
German der - das -die kunze kwezvimwe zvinyorwa, futi ein eine Pane zvinhu zviviri zvisingazivikanwe, zvinoti.
Iwo mazwi Ein uye eine anoreva "mumwe" kana "chero mumwe." Zvinogona kududzirwa nenzira iyi.
Saka, nemazwi api ari iwo zvinyorwa ein uye eine anoshandiswa, uye ndeapi mazwi anotangirwa nezvinyorwa ein uye eine?
Mazwi ese ari echirume neechikadzi ane chinyorwa ein pamberi pavo.
Mazwi ese echikadzi pabonde ane chinyorwa eine pamberi pavo.
Kana isu tinogona kutaura izvi neimwe nzira. Sezvatichangobva kutaura pamusoro, chinyorwa chaicho chemashoko evarume pabonde chaive icho "der" chinyorwa. Icho chirevo chaicho chemashoko asina murume aive "das" chinyorwa. Chinyorwa chemadzimai echikadzi mazwi aive "kufa" chinyorwa.
Chisingazivikanwe chinyorwa ein chemazwi ane chirevo chinyorwa der kana das ndicho chinyorwa.
Kana iwo mazwi ane chaiwo akafa ane chisingazivikanwe chinyorwa, eine ndicho chinyorwa.
Iye zvino iwe uchazotaura izvo pamberi pemashoko echiGerman zvakananga zvichadaro here? indeterminate zvichave zvakadaro Pamberi pemashoko der - das - kufa Chichawanikwa chimwe chezvinyorwa kana ein - eine Chichawanikwa chimwe chezvinyorwa here?
Ngatipindurei uyu mubvunzo ikozvino. Chinyorwa chikuru ndicho chakatarwa chinyorwa.saka der-das-die zvinyorwa. Paunenge uchidzidza izwi, zvakakwana kuti uone kana izwi iri chinyorwa, das kana kufa. Izvo zviri pachena kuti ndeipi yechinyorwa chakatarwa zvinyorwa ein uye eine, izvo zvatove zvisingagumi zvinyorwa, zvinoshandiswa panzvimbo. Sezvatakambotaura, Kana akataura chimwe chinyorwa chezwi reGerman, chisingazivikanwe chinyorwa cheizwi iro inyaya ein.. Kana iyo yakatarwa chinyorwa cheizwi reGerman iri das, iyo isingazivikanwe chinyorwa cheizwi iro zvakare ein., Kana iyo yakatarwa chinyorwa cheizwi reGerman iri die chinyorwa, iyo isingazivikanwe chinyorwa cheiro izwi i eine chinyorwa.
Kana iro izwi rakashandiswa mumutsara, zita rakashandiswa, chinhu, chinhu kana chero zvazviri, kana zvichizivikanwawo neanoona kana vanhu, kana zvakambotaurwa, kana icho chinhu chikaonekwa kana kuziviswa nezvacho. , muchidimbu, chinhu chinozivikanwa Ipapo pane chirevo pamberi peshoko iri chinofanira kushandiswa mumutsara, zvinoti der - das - kufa.
Zvisinei, chero zita, chinhu, chinhu, izwi rinoshandiswa mumutsara nderekuti, kana chisiri chinhu chakambozivikanwa, kana chiri chinhu, kana chiri chinhu chisingazivikanwe, saka chinyorwa chisingazivikanwe, kureva ein-eine , rinoshandiswa pamberi peshoko iri.
Semuenzaniso, ngatinyororei mitsara miviri yakasiyana tichishandisa chinhu chimwe chete pazasi:
Ndakatenga mota iya
Ngatitarisei pamutsara wekutanga, "Ndakatenga mota"anodaro. Ukaudza munhu kuti ndatenga mota, vangati chii kwauri? Oooo rombo rakanaka, watenga chii, chii chinonzi, chitsva kana chechipiri ruoko, imarii uye vanobvunza mibvunzo senge? Saka, sezvazvinogona kunzwisiswa kubva muchirevo chekutanga, pamberi peshoko mota mumutsara wekutanga chisingazivikanwe chinyorwa i.e. ein kana eine Chinyorwa chakakodzera chicha shandiswa. Saka nderipi richashandiswa? ChiGerman kune izwi mota das Auto ndiro shoko. Icho chinyorwa is das chinyorwa. Saka pachinzvimbo cheimwe chinyorwa chinyorwa chisingazivikanwe It ichashandiswa.
Ngatitarisei pamutsara wechipiri. Ndakatenga mota iya anodaro. Iyo mota sezvamakataura zvatotaurwa mota. Inoita kunge mota yatyairwa, yaonekwa kana kutaurwa nezvayo. Kana mota iri muchirevo chechipiri iri mota inozivikanwa, saka mune chirevo chakadai chirevo chirevo chinoti - das - kufa Imwe yenyaya ichashandiswa. Mutsara uyu nekuti izwi reGerman remota ndiro Auto Auto das Auto Izwi richashandiswa.
Uyu ndiwo mutsauko pakati pezvimwe zvinyorwa nezvisingazivikanwe zvinyorwa.
das Auto: mota
ein Auto: mota
ein Buch: bhuku
der Tisch: tafura
ein Tisch: tafura
Zvinyorwa zveGerman Chinyorwa Chidimbu
Shamwari dzinodiwa, isu takapa ruzivo nezve zvinyorwa zveGerman, zvinyorwa zveGerman, zvisingazivikanwe zvinyorwa, German articles Ndozvese zvatichabata pamusoro penyaya iyi. Musoro wezvinyorwa muchiGerman ndeimwe yenyaya dzinonyatsoda kudzidziswa zvakanyatsonaka. Ndokusaka hurukuro yezvinyorwa zveGerman ichiitwa zvakadzama kudaro.
German articles Takaedza kuzvitsanangura kwenguva yakareba nekuti inyaya yakakosha.
Kune marudzi maviri ezvinyorwa muGermany.
MuchiGermany der, kufa uye das artikels inonzi yakananga artikel.
Kune zvekare zvisingazivikanwe zvinyorwa senge ein uye eine. Kune tsananguro dzakadzama dzezvinyorwa zvese zviri zviviri pane yedu saiti. Kuti udzidze zvinyorwa muchiGerman, zvese zvimwe zvinyorwa uye zvisingagumi zvinyorwa zvinofanirwa kunyatso dzidzwa.
Kuverenga pane zvimwe zvikamu muchiGermany
ChiGermany Zvisingazivikanwi Zvokugadzira Zvigadzirwa
MuGerman, 3 iripo: der, das, die
Zvinyorwa zveGermany Zvidzidzo Muedzo
Zvino tora nguva shomanana yekugadzirisa zvinyorwa zvedu zveGermany.
Shamwari dzinodikanwa portal yedu, inova nzvimbo huru uye inozivikanwa kwazvo mumutauro weGerman muTurkey yaive nechinyorwa cheGerman chakanyorwa nezve makosi mazhinji aripo. Nekutsvaga chikamu chekutsvaga chesaiti yedu kana German articles Iwe unogona kuwana zvese zvidzidzo pamusoro pezvinyorwa zveGermany kuburikidza nehurukuro.
Iwe unogona kunyora chero mibvunzo uye maonero pamusoro pezvidzidzo zvedu zveGerman pane almancax maforamu kana muchikamu chemashoko pazasi. Yese mibvunzo yako inogona kukurukurwa nenhengo dze almancax
Kana iwe usingazivi kuti iwe unotevera zvidzidzo zveGerman German lecturesUnogona kuongorora yedu. Zvinoenderana neichi chirairo, iwe unogona kutevedzera edu eGerman zvidzidzo nhanho nhanho.
10. kirasi german nyaya inotaura9. kirasi german nyaya inotauraGerman artikelGerman artikellerGermanartikel germanChii chinonzi artikelnyaya dzakanyorwa
nisa anodaro 7 apfuura
Isu taida chaizvo
Sulo anodaro 6 apfuura
Handina kuwana zvawaitsvaga.
almancax anodaro 6 apfuura
Pano, changamire, waitsvaga chii?
German electro anodaro 6 apfuura
Ndakadzidza Turkish kuburikidza newaiti ino
Syed anodaro 5 apfuura
Ich brauche ein Auto Ndakati nekuda kwedas ein Ndinoda BMW kuitira kuti ini ndidiwe zvinyorwa mumabfupikisi?
ssxx anodaro 3 apfuura
anoti BMW .. duden anotarisa kubva kutsvaga ..
hanife anodaro 4 apfuura
German chirevo chako chidzidzo chakanaka, chaiyo almanx 1 nhamba pamusoro payo, congratulations iwe varume
Bata ozan zvakananga anodaro 4 apfuura
Ndiri 9. Ini ndichatora kuongorora kubva kukirasi yeGermany. Ndinogona kuonga kana iwe ukwanisa kunzwisisa kuti mudzidzisi angabvunza sei nyaya idzi.